Umlando Automobiles Mercedes-Benz M-Class kwaqala ngo-1997 e-America, okuyiwona lesi sigaba lwakhiwe futhi lapho kusukela ngaleso sikhathi futhi namanje iyatholakala. Ukukhiqizwa imishini enjalo kubonakala fashion ngemva obumbi elilandelayo mkhuba US - izimoto ezintathu kwelinye: a evenini, Suv kanye esiteshini nqola. Kulezi izimoto akuzona eqolo nsuku zonke ukuya emsebenzini, kulungile ukulayisha kanye yezitolo ngesonto lapho esesitolo, ungaya izwe nomkhaya wakhe. Omakhelwane nomona ukuthi une - Mercedes. ERussia, isimo Kuthi ezahlukene. Lo mshini ukuthanda abafazi, namadodakazi intombi eseceleni ka oligarchs Russian ngoba bona bathanda ukukhuleka ukuyothenga khokhela hhayi lalelisisa kuze "off-road" imigwaqo amadolobha Russian.
Phakathi ukukhululwa kwe-M-ikilasi Useke wadlula izinguqulo ezintathu - W163 (1997-2005 GG.), W164, futhi W166 (2011-abakhona) Izinguquko kwesakhiwo yalezi ukulungiswa abathathu kuyofikwa Amathrendi ezintathu eziyinhloko:. (2005-2001 GG.)
1) ukwandisa ngobukhulu;
2) nokuncipha petrol;
3) ngcono izakhiwo kanye ukuwohloka trass izakhiwo ngokwesiko off.
Isilinganiso elikhulu ngombono kahle futhi umthamo imizimba M-ikilasi livele izinjini amalitha angaphezu kwamathathu. Eveza ubufakazi balokhu - lolu hlobo imishini upetrol kanye ne-diesel onobuhle ezidumile Mercedes ML 350 emshweni wokugcina Mercedes-Benz. Gasoline injini - V emise eziyisithupha ephethe umthamo we 3.5 litres ka 306 hp futhi ipasipoti kanye petrol 8.8 amalitha ngamunye km 100 kwimodi okuxubile futhi 10.9 amalitha emjikelezweni ezisemadolobheni.
Mercedes ML 350 kulekelelwa BlueTEC ifakwe injini diesel, nakho V6, kodwa umthamo ezincane, mayelana 3 amalitha umthamo 258 hp iphasipoti kanye diesel ageleze 9.5 amalitha ngamunye amakhilomitha 100 ikumodi okuxubile namalitha angu-12 umjikelezo ezisemadolobheni. Turbo iyunithi ihlinzeka ngesivinini esiphezulu 215 km / h futhi ukusheshisa kuya ku-100 km / h ngoba 8.6 imizuzwana, njengoba ehlonipha ejwayelekile European "Euro-6", uma umnikazi uzogcwalisa ezengeziwe (eduze ethangini) entanyeni at ngayinye elandelayo KUDALA ingxenye zokwenziwa urea ngokuthi AdBlue ketshezi. Nge Ukucaciswa ezifana Mercedes ML 350, ngentengo Russian e version likaphethiloli kuqala ruble ayizigidi ezingu 2.97, futhi injini diesel kuqala ruble ayizigidi ezingu 3.07 (amanani elungile iminyaka 01.04.2013), kuba zithandwa kakhulu. Lokhu akusona isimanga.
Kuvele oluhambelana womoya ukumiswa entsha Mercedes ML 350 kungase kwandise njalo ride ukuphakama kusuka 200 mm kuya ku-280 mm. Kanye iphakethe ozikhethela On & Offroad, ukumiswa enjalo anganikeza akukhetheki yokusebenza izindlela eziyisithupha: elula othomathikhi, ebusika, ezemidlalo, ukushayela nge imodi trailer ezimbili zindlela ukushayela off-road.
Mayelana izintandokazi Mercedes ML 350 okuhlaziya, ukubuyekezwa wabanikazi Russia nase CIS amazwe kuncike kakhulu kulokho mishini yayisebenzisa ukukala ukuthi ukuthengwa kwezimoto ezinjalo. Okokuqala imibono ehlukene kwi ukuhlola ukubiza kwezakhiwo off-road Mercedes ML 350. Kodwa udumo akunakungatshazwa uyakufanelekela umsindo ngabodwa nangenduduzo gumbi. Njengoba kusobala ukuthi bonke akhononde ungakhululekile Amatebhe eziqondisa inkinobho futhi isibuko esincane ohlangothini-umbono.
Mercedes ML 350 - imoto ukhululekile, okuyinto endabeni kokuba kuyo inkosikazi yakho kuzokuvumela ukuba kalula ukulawula ukudoba yakho nokuzingela, kulula ukuya kusukela amaphoyisa omgwaqo patrol imoto phezu track, kanye ukwandisa umthamo walokho okuthengile phakathi esitolo 633 amalitha, ngaphandle kokusebenzisa yesibili esihlalweni esiphambili emotweni.
Kokucindezela - kokucindezela Engine ... - Kuyini?
Kuhle "Chrysler" evenini. Chrysler Voyager, "Chrysler Pacifica", "Chrysler Idolobha futhi Izwe": incazelo, izici
Astra - imbali enhle
Yangaphandle - kuyini? Izindlela zokuhlola Ingaphandle
Umlando uju: amaqiniso athakazelisayo nokukhulunywa kokuqala koju